WARRAAQSA GALAANA UUMMATAA!Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo(QBO) irraa haala yeroo waliin walqabsiisuun kenname. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWARRAAQSA GALAANA UUMMATAA!Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo(QBO) irraa haala yeroo waliin walqabsiisuun kenname.
1. Labsiin yeroo hatattamaa seeraafi heeraan hin deeggaramne Oromiyaafi Oromoo irraa hatattaman akka kahu.
2. Waraannii rayyaa ittisaa biyyaafi humni addaa polisii Oromiyaa dhiyeenya leenjifamanii ba’anii Oromoofi Oromiyaa balleessuuf bobbaafaman hatattamaan moraatti debi’anii badii isaan geessisaniif mootummaan itti gaafatamuu qaba.
3, Lubbuu Uummata keenyaa godinoota, Oromiyaa hundatti ajjeefamaniifi qabeenya gubateef mootummaan beenyaa Kennee, qabiinsa yakka kanaaf immo qaamni yakka kana raawwate gaafatamuu qaba.
4, Mootummaan amma aangoo irra jiru kun jalqabumayyuu filannoon osoo hin taane saamichaafi hannaan waan dhufeef inumaayyu murni amma “bilstiginna” jedhamu kun qabsoofi wareegama qeerroofi qarree Oromoo haaluun diina innikkaa ta’ee qeerroofi qarree gidduutti garaagarummaa uumuuf ifaajjii guddaa taasisaa turuufi itti jiraachuun isaa ni beekamaa. Kanaaf murnii kun immoo ammas seera malee yeroo aangoo isaa dheereffachuuf yeroo filannoo Dheeressaa jira. Nuti QBO mootummaa kana filannoon ofirraa buusnee mootummaa ofiin filanneen buluu waan feenuuf filannoon kun taasifamuu qaba, yoo filannoon darbe garuu ji’aa hagayyattii dhaabonni Oromoo ABO,KFO fi PBO akka Oromiyaa bulchuu qaban gad jabeessinee hubachiisuu barbaanna.
1 Caasaa garboomfataa diiguu
2 Eegdota imphaayera kanaa gubbaa hanga gadiitti tarkaanfii gitaa irratti fudhachuu.
3 Qabeenya garboomfataa barbadeessuu
4 Sochii hin barbaachifne kanneen akka kallattii diinni irra jireessaan irra imalu kutuu
5 Kallattiidhaan haala miidhaa hawaasaa hir’isuu danda’uun garboomfataa nagaa dhorkuufi biyya ofii irraa buqqisuuf ganamaafi galgala osoo hin jenne hojjechuufii k.k.f haalduree barbaachisoodha jedhu lafa kaawwachuun gara hojiitti seenuuf QBO qophiisaa xumuree jira.